Faallada shabakadda:Dawladda Somaliland siday u soo xulaysaa wafdiga uga qayb galaya shirka London. | Building Momentum
Faallada shabakadda:Dawladda Somaliland siday u soo xulaysaa wafdiga uga qayb galaya shirka London.
London – Waxgaradka aan arrimahan kala sheekaysannay waxa ay talo ku bixinayaan in wafdiga shirka ka qayb galayaa noqdo mid miisaan culus leh, oo aan loo tirin beel kaliya, isla markaana wata waxa ay madasha la tagayaan, ee aan iska socon uun. Xubin kasta oo ka mid ahina ay iibin karto fikirka Somaliland…..haddii loo baahdo.
Shirka London loogu qabanayo Somalida, ee lagaga hadlayo arrimo badan oo dan u ah mandiqadda geeska Afrika, Somaliya, Somaliland iyo adduunkaba, ayaa warar hoose xaqiijinayaa in ay Somaliland ka qayb galayso. Laakiin weli xukuumadda Siilaanyo kama ay hadlin, waxana lala yaabban yahay sida ay xukuummadda Ahmed Siilaanyo afka uga xidhatay in ay caddayso siyaasaddeeda ku wajahan shirka London ee lagu casuumay.
Ma noqonayso markii ugu horreysey ee ay dawladda Ahmed Siilaanyo ka qayb gasho shir loo qabanayo Somalida, waxana hore u dhacday in wasiirka arrimaha dibadda Somaliya uu sannadkii la soo dhaafay isla London uga qayb galay shir ay isugu yimaaddeen maamul goboleedyada Somaliya. Sidoo kale waxa iyana dad badani sheegayaan in ay wafdiyo dawladda Somaliland ka mid ahi ay meelo kale oo dunida ah kaga qayb gashay shirar lagaga hadlayo dhibaatooyinka Somaliland.
Arrimaha ka qayb galka shirarka Somalida ee ay dawladda Kulmiye ku tallaabsatay, waxa ay daba socotaa ballan qaadkii ahaa in ay beddeli doonto Istaraatiijiyadda siyaasadeed ee muddada dheer ay ku soo guul darraysateen xukuumadihii ka horreyey. Waxanan ka warqabnaa in wakhtigii ololaha doorashooyinka uu wasiirka arrimaha dibadda oo matilayey Xoghayaha khaarajiga ee xisbiga Kulmiye uu la kulmay, Sanatarka la yidhaa Donal Beyn. Mas’uulkaasi sare oo ka tirsan dawladda Maraykanka ayaa dawladdii Rayaale ay isku diideen in ay Somaliland ka qayb gasho shirarka Somalida. Laakiin maamulkii Xisbiga Kulmiye ee ololaha ku jiray ayaa ballan u qaaday Maraykanka iyo Ingiriiskaba in ay iyagu marka ay doorashada ku guulaystaan ay wada xaajood la yeelan doonaan maamullada Somalida, isla markaana aanay gooni uga xidhnaan doonin shirarka Somalida.
Si kastaba ha ahaatee, waxa weli ay xukuumadda Kulmiye raadinaysaa farsamadii iyo sidii ay shacabka u fahamsiin lahayd in ay ka go’an tahay sida ay u beddeleen Istaraatiijiyada Siyaasadeed ee ku wajahan siyaasadda dibadda. Taasi oo u eg mid ka fur furan tii hore, dhaqaale ahaanna ay wax ka soo geli karaan.
Laakiin waxa ay shacabkii ku wareersan yihiin warka shirkan ee aanay weli xukuumaddu ka qaadan mawqif cad. Inkasta oo ay muuqato in ay haddana ka qayb galayso shirkan London ee la qaban doono bisha foodda innagu haysa.
Jaaliyadda Somaliland ee Londonna waxa ay ku kala qaybsan yihiin ka qayb galka shirka. Waxase ay ka midaysan yihiin in haddii ay Somaliland ka qayb galayso ay habboon tahay in aanay dawladdu ka meer meerin ee ay wada tashi uun xataa la samayso qurba joogga London gaar ahaan SSE. Oo xilligan aad uga qaylisay jahawareerka ay arrintani keentay.
Waxgarad kale oo aan arrimahan ka warsannayna waxa ay ii sheegeen in ay dawladdu ka qayb galayso, waxana ay ku talinayaan in dadka ka qayb galayaa ay noqdaan dad gudbin kara mawqifka dawladnimo ee ay Somaliland shacabkeedu aamminsan yihiin. Waxana ay soo dhaweynayaan muddaharaad lagu kabo mawqifka Somaliland ee ku wajahan gooni isku taagga dawladnimo.
Dhinaca kalena waxa ay dawladda Ahmed Siilaanyo ku dhalliilayaan sida uu u xusho wafdiga ay isku raacaan dibadda. Taasi oo ay madaxdii ka horreysey ay eegi jireen wafdigu in aanu noqon doc kaliya amma dheelli ku jiro, in uu waaya arag weheliyo iyo in ay aqoon ahaan ay xubnaha wafdigu ay yihiin dad iibin kara masiirka ummadda.
Isku soo wada duuboo, dadka aan arrimahan kala sheekaysannay waxa ay talo ku bixinayaan in wafdiga shirka ka qayb galayaa noqdo mid miisaan culus leh, oo aan loo tirin beel kaliya, isla markaana wata waxa ay madasha la tagayaan, ee aan iska socon uun. Xubin kasta oo ka mid ahina ay iibin karto fikirka Somaliland.